ရိုင်ယန် Salazar - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » Author Archives: ရိုင်ယန် Salazar
Author Archives: ရိုင်ယန် Salazar
သငျသညျစာသားပင် Las Vegas မှာအသက်ရှူဖို့အဟောင်း 21 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကတည်းကကျနော်တို့အကောင်းဆုံးမျိုးစုံမြည်းစမ်း GRUB ကိုရှာပါ (ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အလှဆင်ခြင်းမရှိ "ဒေသခံတွေသာ" အစက်အပြောက်, ဖြစ်ကြသည်အချို့သောအရာ၏) ကိုအကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်များ 21 ရွေးကောက်တော်မူပါတယ် ရရှိနိုင်ပါ! သငျသညျစိတျမဟုတျဘဲလူတိုင်းကိုအရပ်ရပ်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်, ဒါပေမယ့်ငါတစ်ဦးချင်းစီသည်တဦးတည်းမှာပြည့်စုံရာအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်! ...
ကျွန်တော်ဆောင်းပါး၏အသားထဲသို့ရမီ, ငါအောက်ပါမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုသက်တမ်းထပ်တိုးချင်တယ်။ အဲဒါကို 'တယောက်ရဲ့ junk အခြားလူသားရဲ့ဘဏ္ဍာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ' 'ဟုဆိုသည်ထားပြီး ဒါဟာခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ဘုံတွင်လည်းမှန်သည်။ One ရဲ့လမ်းကြောင်းကအမှန်တကယ် ''-ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ '' အခြားရဲ့ဖြစ်နိုင်သည် ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့မျက်စိဖမ်းမိခြင်းနှင့်များမှာပြီအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုဖော်ပြထားခြင်းစဉ် ...
Aimée Ricca SMPTE မှာဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge Marketing ကိုအလေ့အကျင့်ပျအတှကျအသိအမှတ်ပြု!
Motion Pictures ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏အသငျး (SMPTE) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 1,200% ထက် ပို. အားဖြင့်မီဒီယာအယ်ဒီတာအဖွဲ့နေရာချထားမှုကိုတိုးမြှင့်သည့်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာနှင့်အလေ့အကျင့်,-အစွန်းဖြတ်တောက်မှအကြိုးသိရသည်။ Aimée Ricca (1916 ကတည်းကရုပ်ရှင်နဲ့ထုတ်လွှင့်ကမ္ဘာ၏အလယ်ဗဟို) SMPTE များအတွက်စျေးကွက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးဆောင်, သူက၎င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုရှေ့ဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဘို့ ...
NAB ပြရန်ပါတီများ: 2018 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများများစာရင်း
ကျနော်တို့ပြီးနောက်-ပါတီများအတွက် 2018 NAB Show ကိုဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ NAB ပြရန်နှင့်အတူဆက်စပ်ပျော်စရာ၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း! အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကြည့်ပိုမိုသောအချက်အလက်များများအတွက် NAB Show ကိုပါတီအသေးစိတျကို click အချို့သည်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့, ဖိတ်ကြားချက်ကိုခြင်းဖြင့်သာလျှင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးဝန်ခံချက်တာဝန်ခံရှိသည်။ ဒါဟာသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးပြေးစာရင်းနှင့်အရှိဆုံးပြည့်စုံပါ! ကျနော်တို့ကို update ...
Rayleigh Broken (ဆုံးဖြတ်ချက်) Barrier!
ကောင်းပြီ, သူတို့ကအမှုကိုပြုပါတယ်။ သငျသညျအိပျပျြောဆုံးနဲ့ (သို့သော်ငါ့အား knownst) မသိလိုက်ဘူးနကွေစဉျ, သူတို့ကနောက်ဆုံးတွင် "resolution ကိုအတားအဆီး" ကျိုးပဲ့င့် - ခေါ် "။ အဆိုပါ Rayleigh ကန့်သတ် 'ကြီးစွာသောရဲ့, သငျသညျဆိုသညျကား။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဖြစ်ပါတယ် "resolution ကိုအတားအဆီး?" ငါ၏အဆွေအပေါ် Read, ငါသည်သင်အလင်းပါလိမ့်မယ် ... ပထမဦးစွာပယ်, က "Rayleigh ကန့်သတ်" (အရှိဆုံးအရာဖြစ်ကြ၏ကဲ့သို့) က၎င်း၏ကိုရှာဖှတှေ့ပြီးနောက်အမည်ရှိ ...
#NABShow မှာတှေ့မွငျရအဖြစ်ထုတ်လွှင့်အဘို့အလင်းရောင် (ခေါ် "အလင်းရောင် 101")
အသံလွှင့်မှုအတွက်ခေတ်သစ်အလင်းရောင်ကယ့်ကိုအရောင်ရုပ်မြင်သံကြား၏အသွင်အပြင်နှင့်အတူ 1938 အတွက်သွားတယ်။ များစွာသောလူကိုစဉ်းစားကြဘူးကြောင်းတစ်ခုမှာတကယ်တော့ဇာတ်စင်နှင့်ရုပ်ရှင်အလင်းရောင်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားဖြစ်ပါတယ်။ သငျ့လျြောသောအလင်းရောင်တစ်ခုအလင်းညွှန်ပြခြင်းနှင့်ပေါ်မှာလှည့်အဖြစ်နီးပါးအဖြစ်ရိုးရှင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျမတတျနိုငျပါလျှင်အားလုံးသည်ဖန်စီက transmitter နှင့်ကင်မရာများတစ်ဦးအရာဆိုလိုဘူး ...